Kurapa Vagadziri & Vanopa - TAIWAN Kurapa Fekitori
Smedtrum ST-691 IPL sisitimu yakagadzirirwa nemaviri emaoko emaoko maviri emahara. Izvo zvinobatsira kubata akasiyana nzvimbo yemuviri nekuwedzera kuchinjika uye kunyatsoita. Smedtrum ST-691 IPL System chishandiso chakasiyana chinokwanisa kushandiswa pakurapa mburwa, maronda etsinga, epidermal pigmentation kubvisa, kubvisa bvudzi uye kugadziridza ganda.
ST-790 Phototherapy Sisitimu
Phototherapy system inoumbwa nematanho emagetsi emwenje e LED kuita akasiyana marapirwo emwenje, anosanganisira kudzikisira cystic acne, ganda kumutsa, kugadzirisa ronda, uye kupokana-kuzvimba.
Smedtrum ST-221 Picosecond Nd: YAG Laser Sisitimu inounza yakakwira yepamusoro simba uye ipfupi kupomba kwenguva, iyo imwechete kurovera kwehupamhi iri mu picosecond level, ichipa inoshanda zvakanyanya uye chaiyo kurapwa kwematattoo uye pigmentation kurapwa.
CO2Laser inzira yakajairika yekugadzirisa vanga uye kuunyana kwemakwenzi. Nemablative laser kurapwa, kunobuda kwakakura mhedzisiro yekumutswa kweganda, vanga kugadzirisa uye kuunyana kwemakwenzi. Isu tinopa ST-350 semhinduro dzakanakisa dzeganda rakakomba.
ST-580 HIFU Sisitimu
Smedtrum HIFU system ST-580 yakashandisa advanced ultrasound tekinoroji
kubudirira kusimudza ganda nenzira isinga pinde. Iko kukwirira kwakanyanya kwakatariswa
ultrasound inopinda zvakadzama kusvika pamwero weSMAS kukurudzira iyo
synthesis ye collagen, kuburitsa mhedzisiro inogara kwenguva refu yekusimbisa kweganda.
ST351 CO2 Laser Sisitimu
CO2 Laser inzira yakajairika yekugadzirisa vanga uye kudzikisira kuunyana. Nemablative laser kurapwa, kunobuda kwakakura mhedzisiro yekumutswa kweganda, vanga kugadzirisa uye kuunyana kwemakwenzi. Isu tinopa ST-351 semhinduro dzakanakisa dzeganda rakakomba.